Duesseldorf HELAU! Doqon soo baxay in tiro si ay u dabaal nolosha!
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » dhaqanka » Duesseldorf HELAU! Doqon soo baxay in tiro si ay u dabaal nolosha!
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Entertainment • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Dowladda • Shirarka • News • Dadka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Diiwaangelinta tirada Fayraska Corona kama joojin dadka ku nool Duesseldorf, Jarmalka inay u dabaaldegaan nolosha, waxa loola jeedo in loo dabaaldego bilawga Carnival maanta.
Hoppeditz ayaa ka soo toosay Duesseldorf, laakiin maaha wax badan gudaha Cologne!
Duesselorf, Magaalada Jarmalka ee ku taal Webiga Rhine, Kick-off wuxuu dhacay maanta Nov 11, 2021 saacadu markay tahay 11:11 subaxnimo Kalfadhiga Carnival 2021/2022
Carnival waxay ku saabsan tahay nacasyada. Waxayna isugu yimaadeen hoolka magaalada Duesseldorf hortiisa
Waqtigii la'aanta carnival ee Duesseldorf wuu dhammaaday.
Hopditz ayaa toosay. Saacada 11.11. Saacadu markay ahayd 11.11 ayuu ka soo baxay dherigii khardal lahaa, oo wuxuu kuwii nacasyada ahaa reer Laawi u akhriyey taliyayaashii magaalada. Duqa magaalada Lord Dr. Stephan Keller ayaa ku jawaabay hadal gaaban oo ka yimid balakoonka, ka dib wuxuu u soo degay Hoppiditz Tom Bauer oo ku yaal fagaaraha suuqa.
Waqtigaan la joogo, saaxiibo badan oo carnival ah ma aysan awoodin inay la socdaan dhacdada sanadlaha ah ee aadka loo sugayay, sidii ay sameeyeen sanadkii hore, laakiin mar labaad shaqsi ahaan goobta.
Kumanaan kun ayaa ka faa'ideystay fursadan oo si wadajir ah u dabaaldegay bilowga fadhiga.
Carnival ee Duesseldorf waxa uu leeyahay hal-ku-dheg:
"Waan u dabaaldegnaa nolosha".
Ka dib hadalka Hoppiditz, Guddiga Düsseldorfer Carnival wuxuu soo bandhigay carnival cusub oo ku dhuftay marxaladda hawada furan ee horteeda hoolka magaalada.
Waxaa ka mid ahaa fanaaniinta Swinging Funfares iyo KG Regenbogen, kuwaas oo qaaday heesta halku-dhegga, Alt Schuss, Kokolores, De Fetzter iyo qaar kale oo badan.
Kalfadhiga, nacasyada caasimadda gobolka waxaa hogaamin doona Prince Dirk II (Dr. Dirk Mecklenbrauck) iyo Venetia Uåsa (Uåsa Katharina Maisch).
Noofambar 13, Jecken-ka ugu yari wuxuu u dabaaldegaa soo kicinta mopeditz carruurta ee Burgplatz ee giraangiraha Ferris. Niklas Wesche oo XNUMX jir ah oo ka socda Rheinische Garde Blau-Weiss ayaa u dabaaldagi doona bandhiggiisa isagoo ah mopeditz carruur ah.
Doorashada lamaanaha amiirku waxay dhici doontaa 19ka Noofambar gudaha Stadthalle. Laga soo bilaabo Altweiber oo leh Rathaussturm 24ka Febraayo 2022, fadhigu wuxuu geli doonaa marxaladda kulul. Muhiimadu waa socodkii isniinta ee Rose ee 28kii Febraayo 2022.
Nasiib darro magaalada Cologne ee u dhow, magaalada uu Carnival ugu jiro hidda-wadaha qof walba, amiirku wuxuu la bukooday Fayraska Corona.